Soo dejisan Teleport Pro 1.72 – Vessoft
Soo dejisan Teleport Pro
Teleport Pro – software awood leh in ay dib u soo ceshano xogta internet ka. Software wuxuu taageeraa socda ee wax looga qabanayo isusocodka raadinta badan, helaan goobaha password-ilaaliyo, sifeynta ee files by size iyo nooca, raadiyo keywords iwm Teleport Pro kuu ogolaanaya in aad kala soo baxdo qaybo ama website-yada oo dhan oo iyaga ka arkaan iyadoo heerka sare oo aan heli si aad u internet-ka. Software waxuu si ay u abuuraan goobta nuqul ama muraayad la badbaadiyay ee qaab-dhismeedka gudaha ee directories iyo faylasha loo baahdo. Teleport Pro sidoo kale taageertaa Mugdiyada kala duwan ee search, jadwalka mashruuca iyo awoodda ay u wuxuuba links kale.
Kumbiyuutarada of sites iyo cawradooda
Abuurista tus ama goobaha muraayad
Waxay abuurtaa liiska bogagga iyo faylasha on goobta
Comments on Teleport Pro:
Teleport Pro Software la xiriira:
Internet Software ayaa si ay u abuuraan router dalwaddii on your computer. Software soo bandhigayaa warbixin ku faahfaahsan oo ku saabsan isticmaalka gaadiidka ee dhibic helaan in ay internet-ka.
العربية, English, Français, Español... UltraSurf 16.03
Internet qalab waxay bixisaa helitaanka ah in goobaha hor istaagay. software The u saamaxaaya in ay garab block ee faafreebka abuurista xidhiidh dhex maray server wakiil gaar ah.
Network Internet software The si ay u abuuraan network dalwaddii gaarka loo leeyahay oo u dhexeeya kombiyuutarada iyada oo loo marayo internet-ka. The algorithms encryption kala duwan waxaa loo isticmaalaa tiirka ilaaliyo in network degaanka.
العربية, English, Українська, Français... SG TCP Optimizer 4.0.6
Internet Software in ay tayadoodii soo koobin ee la xiriira internet-ka. Software waxay bixisaa wax soo saarka ugu weyn ee bandwidth ah.
Internet Agabka awood badan inay dhexda xirmooyin shabakadda. Sidoo kale software uu leeyahay hawlaha shaandhaynta baakadda iyo taageertaa qabashada baakadda fog.
Horumarinta Imtixaanka Tool aad ku qorshayso iyo reserved qalabka elegtarooniga ah. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan wareeg ah Tifaftiraha graphic iyo si ay u qabtaan imtixaanka.
Converters Audio qalab The functional in ay si deg deg ah loogu badalo faylasha audio. software The kuu ogolaanayaa inaad si loogu badalo files galay qaababkan soo caan ah oo soo saaro si xawli caadi audio ka video ah.
English, Українська, Français, Español... DC++ 0.862
English, Français, Español, Deutsch... XAMPP 5.6.24
Microsoft Visual C++ Redistributable 2015 2015, 2013 2013, 2012...